motor stepper darawal-DM860A - Shiinaha Changzhou ay jeceshahay Motor
motor stepper darawal-DM860A
DM860A waa nooc ka mid ah laba-waji lugaha hybrid darawal baabuurta, danab drive ee taas oo ka 24VDC in 80VDC. Waxaa loogu talagalay in loo isticmaalo iyadoo 2-waji motor stepper hybrid of dhammaan noocyada la 57mm si 110mm dhexroor dibadda iyo in ka yar 8.0A marxaladda hadda. circuit Tani in ay ansixiyeen ay la mid tahay wareeg ee ay gacanta ku Howlsocodsiinta, taasoo keeneysa baxsad motor habsami ku dhowaad oo aan buuq iyo gariirka. Hording Xuddunta markii DM860A hoostiisa xawaaraha sare sidoo kale waa weyn u ka badan yahay darawalka laba-waji kale, waxa ka badan, sax qabto waa sidoo kale ka sareeya. Waxaa si weyn loo isticmaalaa in size qalabka gacanta tiro dhexe oo weyn sida mashiinka iyo taag, mashiinka CNC, iyo mashiinka daabacdaa computer, Cabaynta mishiinada iyo wixii la mid ah.
Celceliska gacanta hadda, 2-waji saarka sinusoidal drive hadda
Supply danab ka 24VDC in 80VDC
Overvoltage, hoos danab, overcorrect, wajiga ilaalinta circuit gaaban
14 channels hoosaadka iyo si toos ah hoos ula taagtaagan-hadda
8 channels wajiga soo saarka goob hadda
Amarka offline terminal aqbasho
Xuddunta Motor la xiriira la xawaaraha, laakiin aan la xiriira tallaabada / kacaanka
xawaaraha bilowga Sare
Xuddunta hording High hoos xawaaraha sare
danab Input 24-80VDC
Input hadda <6a
Output hadda 2.8A ~ 7.8 A
isticmaalka Isticmaalka: 80W, Caymiska Gudaha: 10A
heerkulka Heerkulka shaqeynta -10 ~ 45 ℃, Hase yeshee, heerkulka -40 ℃ ~ 70 ℃
huurka Ma uumiga, ma dhibco biyo ah
gaaska Mamnuucidda gaasas guban kara iyo boodh tabinta
Musmaarradii shaqooyinka iyo description:
1) isku xira musmaarradii gaadmada ah
PUL +, PUL- signal garaaca wadnaha, PUL + dhammaad wanaagsan ee la karsado aqbasho pinPUL- waa dhammaadka wakhtigii xun ee wadnaha pin aqbasho
DIR +, DIR- signal DIR: DIR + dhammaad wanaagsan ee la gelin jihada pinDIR- waa dhammaadka wakhtigii xun ee jihada pin aqbasho
ENBL + In loo sahlo signal: ENBL + dhammaad wanaagsan ee pin aqbasho jihada. signal waxaa loo isticmaalaa Karti siinta / naafada darawalka. heerka sare ee awood darawalka iyo heerka u hooseeya naafada darawalka.
ENBL- ENBL- waa dhammaadka wakhtigii xun ee pin aqbasho jihada. Sida caadiga ah ka tagay shaqo ku lahayn (awood)
2) musmaarradii jaantuska taararka:
signalada kontoroola PC waxay noqon karaan firfircoon heerka korontada sare iyo hoose. Marka heer sare korontada waa firfircoon, oo dhan ay gacanta ku calaamadaha xun loo wada xiri doona GND. Marka heerka korontada ku yar yahay firfircoon, dhammaan calaamadaha fiican gacanta lagu wada xiran doono dekedda dadweynaha. Haddaba bal laba tusaalooyin (ururiyaha Open & PNP), fadlan hubi:
Berdaha 1. Input circuit dekedda (xidhiidha Yang)
PC saarka isku xira furan
Berdaha. 2 circuit dekedda Input (xidhiidha Yin)
PC PNP saarka
Fiiro gaar ah: Marka VCC = 5V, R = 0
Marka VCC = 12V, R = 1K,> 1 / 8W
Marka VCC = 24V, R = 2k,> 1 / 8W
R waa in ay ku xirmaan qayb ka signal gacanta.
3.Function doorashada (Isticmaalka musmaarradii dhex geliyaa si loo gaaro shaqo this)
1) xalinta tallaabo Micro ayaa lagu wadaa by SW 5,6,7,8 ee biiro daraa sida ku cad shaxda hoos ku qoran:
2) goob hadda xannibid
SW4 waxaa loo isticmaalaa ujeedada this. OFF taasoo la micno ah in kuwa hada ah xannibidda ayaa lagu wadaa in ay nus ka mid ah loo doortay firfircoon hadda iyo ON taasoo la micno ah in xannibidda ayaa lagu wadaa inuu la mid ah sida hadda la doortay firfircoon ahaan.
3) goob hadda Output:
Saddexda gelinno hore (SW 1, 2, 3) ee ku biiro daraa ah waxaa loo isticmaalaa si ay u dejiyaan hadda firfircoon. Xulo goob
Dhow hadda motor ayaa loo baahan yahay
Output hadda (A)
4) function Semi-socodka:
function Semi-socodka waa in ay jirto oo aan talaabo atar Ms after200, wax soo saarka hadda darawalka si toos ah hoos u dhigay 40% wax soo saarka qiimeeyo hadda, kaasi oo loo adeegsaday si looga hortago motor h
4. musmaarradii motor & xoogga,
Motor iyo xoogga musmaarradii
Power sahayda Koronto: DC24-80VDCThe talooyinka ugu sarreysa hadda aan kor u awooddo si aad u 6a
5. faahfaahinta Farsamada:
Si aad u leeyihiin 20mm oo meel bannaan oo ku wareegsan, oo aan la soo aadan lagu qori karaa in qalab kale oo kululaynta. Waa maxay more, fogaado ciidda, ceeryaamo saliidda, gaaska xoqe, qoyaan culus iyo gariirka sare. (Unit = mm)
6. qabsiga ee dhib
1), xaaladda on calaamad muujinaysa iftiinka ee
PWR: cagaaran, iftiinka shaqo caadi ah.
Tusin: casaan, iftiinka failure, motor la wajiga gaaban-circuit, overvoltage iyo ilaalinta-danab ka yar.
tilmaame Alarm sababaha tallaabooyinka
LED off jeedo Wrong la xidhiidha awoodda Hubi taararka awoodda
Low-voltages waayo, xoog Ballaadhi danab awoodda
Motor ma ordi, aan haysta Xuddunta xiriir Wrong of motor stepper Sax ay taararka
signal u celi waa wax ku ool ah marka offline Samee Dib u celi xumaada
Motor ma ordi, laakiin waxay ku adkaysatay Xuddunta haysta Haddii aan signal garaaca wadnaha aqbasho Dheellitir PMW & signal heerka
Motor waddaa jihada khalad
xiriir fiilooyin Wrong '
Isbedelka la xidhiidha wax ka mid ah 2 fiilooyin
signal jihada aqbasho Wrong goob Change jihada
Motor ee Xuddunta hayo waa mid aad u yar qaraabo aad u yar in ay meel hadda goob hadda sax ah loo qiimeeyo
Acceleration waa mid aad u dhakhso ah Yaree xawaaraha
oo xero motor Meesha ka saaro failure farsamo
Darawalka ma u dhigma la motor ka Beddel darawal ku haboon
7. Driver koronto galin
nidaamka gacanta A complete motor stepper waa inay ku jiraan drives stepper, DC korontada iyo xakamaysada (source garaaca wadnaha). Soo socda waa jaantuska taararka nidaamka caadiga ah
Laba iyo toban Bisha Limited damaanad
Xiisoonayaan WADIDDA. faragalin waxyaabaha ka dhanka ah cilladaha ee qalabka iyo sancada muddo 12 bilood laga bilaabo shixnad ka mid ah warshad .Intii waqtiga damaanadda, ay jeceshahay WADIDDA midkood doono, at waa ikhtiyaar, dayactirka ama bedelo wax soo saarka taas oo cadeeyay inuu yahay haleysan.
warranty kor ku xusan ma kordhiyo si wax soo saarka kasta oo ay waxyeello by sababo handlings munaasib ahayn ama aan ku filnayn by macaamiisha, aan habboonayn ama wirings macaamiisha aan ku filnayn, ka beddelid sharci darro ah ama si xun u .ama hawlgal ka baxsan caddaymaha korontada ee alaabta iyo / ama hawlgal ka baxsan caddaymaha deegaanka ee sheyga .
Helitaanka Adeegga damaanad
Si aad u hesho adeega damaanad, tirada soo laabtay oggolaansho maaddo (RMA) waa in la helaa ka adeegga macaamiisha ee e-mail: longsmotor@hotmail.com . Ka hor inta soo laabtay alaabta for adeegga. Customer prepay doonaan eedeeyay maraakiibta soo saarka ku soo laabtay ay jeceshahay WADIDDA oo ah adeegidda laga damaanad, oo ay jeceshahay WADIDDA bixin doonaan soo celinta alaabta in ay macaamiisha.
Xiisoonayaan WADIDDA ka dhigaa ma laha damaanad kale, sidoo kale muujiyay ama si dadban, marka la eego wax soo saarka. Xiisoonayaan WADIDDA si gaar ah afeefanaysaa ee fasaxyada la merchantability iyo taam ujeeddo gaar ah. Qaar ka mid ah maamulada hana u oggolaan in xadeyn ku saabsan sida ay u dheer iyo damaanad maldahan socdaa .si xaddidaadda kor ku xusan ama u cayrinta waxaa laga yaabaa in aad dalbato in aad, si kastaba ha ahaatee, wax damaanad maldahan ee merchantability ama taam waa xadidan oo ay ku duration the12 bilood of this damaanad qoran.
Previous: motor stepper darawal-DM545A
Next: motor stepper darawal-DM2722A
12v DC Motor darawalka
2 Driver Phase Stepper Motor
3 Phase Driver Motor Step
Bldc Motor 24v Driver 15a
Bruhless Motor Oo Driver
Brushless Bldc Motor darawalka
Kit Driver CNC Stepper Motor
Darawalka Board Tb6560
Darawalka Waayo Stepping Motor
Module Driver Waayo, CNC Machine
Darawalka Power Stepper Motor Sare
Darawalka Motor Tayada Sare
High Xuddunta Motor Iyadoo Driver
NEMA 14 Stepper Motor Oo Driver
Printer Driver Motor
Howlsocodsiinta Motor Oo Drive
Control Speed ​​Driver
Stepper Motor Oo Driver
220v Driver Stepper Motor
Stepper Motor Driver maamusha
Stepper Motor Iyadoo Driver
Stepper Motors Oo Drivers
Saddex-Phase Bldc Motor Driver
motor stepper darawal-DM545A
motor stepper darawal-DM542A
motor loop xiran darawal-HBS57
motor loop xiran darawal-HBS86H
motor stepper darawal-DM420A